Kusunga Beche Nekugeza Beche - Masasi eHarare
DzeBonde Kusunga Beche Nekugeza Beche
Kusunga Beche Nekugeza Beche
Mangwanani madzimai, ndauyawo nefundiso yangu yekugeza nekusunga mapeche edu.
Chekutanga ndinokukwazisai ndokumbira ruregerero kune avo vacha feeler offended by the term beche.
Chaita kuti ndinyore kudai…ma comment nema advise andinoona vamwe venyu muchifundisana pano nenhau iyi.
3. KUGEZA BECHE
Mukadzi wese ane Natural Bacteria and Fungi mubeche rake, basa razvo ndezvekudzivirira ma infection. Naizvozvo hatifanirwe kugeza tichinon’na, uyezve hatifanirwe kugeza nesipo dzine maperfume kuzasi kwedu. Hatifanirwe kugara takapfeka machira kana kuisa ma salt kuzasi kwedu.
Kunon’ona kuzasi kunokonzeresa Bacterial Vaginosis inoita kuti ubude mvura dzakawanda dzinekamweya. Kunoita kuti uite thrush.Kunoita zvekare kuti ubate ma infection that cause mutations in your cervix leading to cancer.
Kusazi kwakasikwa kwakadaro kuti kubude discharge asi discharge iyi haifanirwe kuwanda zvekutotesa bhurugwa, haifanire kuita mvura mvura kana kunyanya kukora, haifanirwe kuita green or yellow and haifanirwe kunhuhwa zvachose. Ukaona une discharge inonhuhwa please get it checked as soon as possible.
Discharge yako inokwanisa kuwanda during pregnancy or during ovulation inowanda zvekare kana wanzwa nezemo asi haifanirwe kunhuhwa zvachose.
Beche chinhu chakangwara chinozvigeza chega mukati. Isu tinofanirwa kugeza kunze chete. Kana uchigeza beche unofanirwa kutanga wageza pakati pemagaro first. Wapedza wogeza beche rako ne feminine wash please musageza ne sipo kana nemvura yoga nekuti mvura yoga haibvisi sweat zvozokonzera kunhuhwa. Kana muchigeza beche take your time kunyanya pakabhinzi nepane mavhudzi. Matinji anoda kugezwa one by one. Uye beche harigezwi nembama you need to have katowel kako kekugezesa beche kari soft. Beche rinogezewa ne warm water kubvisa ma bacteria anokonzera odour and infection. Kana wanyatsogeza wotora cold water yako wodira mbichana mbichana uchisunga nekusunungura nyama dzako kwe 2 minutes. Beche rinofanirwa kupukutwa zvakanaka wonyatsooma wopfekawo panty liner kwete kupakira machira.
Unonzwa umwe achiti ndinosemeswa nehurume ndosaka ndichino’ona. Zvinosara mukati zviya haasi masperm i discharge yako .Panguva yebonde chibereko chako chinoshama kugadzirira kudiridzirwa hurume, murume paanotunda achingopedza icho chinobva chavharirawo ma sperm ese mukati. Tushoma twasaririra nditwo twaunoona tuchierera the rest also get absorbed mumakoronga ari mubeche. Hakuna munhu ane healthy bacteria mubeche rake anosara achijuja masperm 3 minutes after asvirwa. Ukaona uchibuda mamvura ari thin after kusvirana you need to get it checked. Pamunopedza bonde zvakanaka kugeza kunze kwebeche nemvura inodziya, after kusvirana unogeza uchiita se uri kusunga wet uchisunugura very fast wapedza wodira mvura inotonhora uchisunga nekusungura zvakare wopukuta zvakanaka no need kunon’ona .